မော်ဒယ် : PR9281800 ကုန်ပစ္စည်းအပိုင်း: Vanity + Countertop + ကြေးမုံအရွယ်အစား: အနတ္တ: 1800*550*885、ကြည့်မှန်: 570*45*1200*2pcs အရောင်: Ash သို့မဟုတ်ပစ္စည်းစိတ်ကြိုက်: အစိုင်အခဲပြာသစ်သား, သဘာဝစကျင်ကျောက်, DTC ဟာ့ဒ်ဝဲ. 1.2နူးညံ့သောတံခါးများ 2. နှစျခုပျော့ - closedrawers 3. ချိန်ညှိအမြင့် leveler 4. သဘာဝစကျင်ကျောက် 5. Eco-friendly ဆေးသုတ် 6. handcrafted အနတ္တ 7. သစ်သားဘောင်မှန် ...
မော်ဒယ် : PR886 ထုတ်ကုန်အပိုင်း: Vanity + Countertop + ကြေးမုံအရွယ်အစား: အနတ္တ: 1350*600*850、ကြည့်မှန်: 540*40*1000 အရောင်: Ash သို့မဟုတ်ပစ္စည်းစိတ်ကြိုက်: အစိုင်အခဲပြာသစ်သား, သဘာဝစကျင်ကျောက်, DTC ဟာ့ဒ်ဝဲ. 1.2နူးညံ့သောတံခါးများ 2. အထဲမှာနှစ်ခုဖုံးကွယ်အံဆွဲ 3. ချိန်ညှိအမြင့် leveler 4. သဘာဝစကျင်ကျောက်. 5. Eco-friendly ဆေးသုတ် 6. handcrafted အနတ္တ 7. သစ်သားဘောင်…
မော်ဒယ် : PR-7281 ထုတ်ကုန်အပိုင်း: Vanity + Countertop + ကြေးမုံအရွယ်အစား: အနတ္တ: 800*550*850 ကြည့်မှန်: 750*130*900 အရောင်: အဖြူသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်း: အစိုင်အခဲရော်ဘာသစ်သား, အထပ်သား, သဘာဝစကျင်ကျောက်, DTC ဟာ့ဒ်ဝဲ. 1. 2နူးညံ့သောတံခါးများ 2. ချိန်ညှိအမြင့် leveler 3. သဘာဝစကျင်ကျောက်. 4. Eco-friendly ဆေးသုတ် 5. handcrafted အနတ္တ 6. သစ်သားဘောင် mirrorand အနတ္တ Q1: ဘာလဲ ...
Mirror 5mm copper free and lead free silver mirror fingerprint-free for mirror frosted area Size 500mm,600မီလီမီတာ,700မီလီမီတာ,800mm Lamp 5050 high output SMD Led stripes Light source 3000K-6000K/24lm/pcs,60pcs/m 14W/m,အော်>80,long hours of 50000h LED driver UL listed,CE certificate,IP44 Certificate UL/cUL, CB, ဒီနည်းကို, RoHS certificates,with 2years warranty More functions for option -Custom shape,…
Model PR-924 2000 ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား 2000*540*750 mm Mirror Size 2005*200*775 mm Material Oak wood Countertop Natural marble Basin 1280℃ one time molding ceramic basin. Glaze အထူ>1.1mm Mirror Material Oak wood frame ,5mm copper free silver mirror Color Oak opening paint Hardware DTC soft closing hinge & under mounted drawer…